I-Van Buren B&B, iPropati yeRetreat yoSapho lwase-Ottawa - I-Airbnb
I-Van Buren B&B, iPropati yeRetreat yoSapho lwase-Ottawa
Isilo-qabane esithandekayo sinobuhlobo kwigumbi elinye lokulala emazantsi omlambo kodwa sikufutshane ngokwaneleyo ukuba ungahamba uye kwindawo zokutyela edolophini, kwiivenkile ezithengisayo, kunye neminyhadala efana neWine kunye neJazz Fest, i-Oktoberfest, iMarike yaseKringle nokunye okuninzi. Iibhloko nje ezimbalwa ukusuka kwindlela ye-I&M yomjelo yokuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile, kunye nokukhawuleza ukuya kwi-Starved Rock State Park kunye ne-Skydive Chicago. Le propathi yi-duplex kwaye unendlu yabucala ephezulu, enomnyango wabucala. Umgangatho osezantsi unabaqeshi bexesha elizeleyo abasikhathaleleyo le ndawo.
Le yipropathi esandula ukulungiswa ukusukela ngoJan 2021, kwaye siyidale ukusuka phantsi sicinga ngabahambi. Ababuki zindwendwe bakho banothando lokuhamba kunye nokubamba iindwendwe, ke ngoko senze konke okusemandleni ethu ukupakisha eyona mali ininzi yebhanti kwindawo yokuhlala yezoqoqosho, kwaye sikubonelele kungekuphela nje izinto ezisisiseko, kodwa intuthuzelo yokwenyani kunye nobunewunewu obuncinci bongeziweyo ngokunjalo.
Igumbi lokulala linyulwe ngoomatrasi omtsha we-queen ubungakanani benkumbulo, kunye neelinen ezisemgangathweni. I-100% yamakhethini okuthintela ukukhanya ngaphezu kwe-100% i-shades yebhlokhi yokukhanya ifanelekile kubasebenzi beshifti. Zonke ezinye iifestile zixhotyiswe ngee-shades ezithintela ukukhanya kunye nokunceda ukuququzelela ukuhlala ngokuphumla.
Nokuba uza e-Ottawa impelaveki yokuhamba intaba, ukungcamla iwayini, okanye ukuntywila esibhakabhakeni, okanye ukuhlala ixesha elide ngelixa usebenza kule ndawo, sinethemba lokukunika umgangatho kunye nekhaya elitofotofo kude nekhaya.
45" HDTV ene-I-Netflix, I-Roku, I-Amazon Prime Video
Asihlali kwipropati, kodwa sihlala sifumaneka ngefowuni. Umgangatho osezantsi wabaqeshi bexesha elide ukhathalela ipropati, ukuba unesidingo esingxamisekileyo.